Edemede Eric Tejeda na Martech Zone |
Edemede site na Eric Tejeda
Eric Tejeda bụ onye isi ahịa ahịa maka Ekwe Omume. Eric na-akwalite ebumnobi uto nke otu ahụ site n'iwepụta ngwaahịa na ọrụ ọhụrụ, ịkwalite ọchịchị echiche, ime ka amata akara, na ọgbọ ndu ndu. Eric ewepụtala nchịkọta teknụzụ ahịa nke na-asọpụrụ ọchịchọ ndị ahịa, na-enye ozi dị mkpa ma na-ewulite ntụkwasị obi. Maka ozi ọzọ gaa na www.possiblenow.com.
Mee ka mbọ ịre ahịa 2022 buru ibu site na njikwa nkwenye
Mọnde, Jenụwarị 10, 2022 Mọnde, Jenụwarị 10, 2022 Eric Tejeda
2021 abụrụla nke a na-atụghị anya ya dị ka 2020, dịka ọtụtụ okwu ọhụrụ na-ama ndị na-ere ahịa azụmaahịa aka. Ndị na-ere ahịa ga-adị mkpa ka ha nọgide na-agba ọsọ ma na-anabata ihe ịma aka ochie na nke ọhụrụ ka ha na-agbalị imekwu ihe na obere. COVID-19 gbanwere ụzọ ndị mmadụ si achọpụta na ịzụ ahịa - ugbu a gbakwunye ike na-emekọ ọnụ nke ụdị Omicron, ọgba aghara na-enye ndị ahịa na mgbanwe mmetụta nke ndị ahịa na egwuregwu mgbagwoju anya. Ndị na-ere ahịa na-achọ ijide ihe a na-achọsi ike